Global Voices teny Malagasy » Kyrgyzstan: Tafiditra Anelanelan’ireo Nasionalista, Manasazy Mpanao Gazety Ny Fitsarana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2012 2:03 GMT 1	 · Mpanoratra Atai Muratbekov Nandika Erikah
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fahalalahàna miteny, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Tamin'ny 3 Jolay taona 2012, namoaka ny didim-pitsarana nandrasan'ny maro efa ela mikasika ny raharaha iray niteraka adihevitra be momba an'i Vladimir Farafonov, izay mpitoraka bilaogy sady mpanao gazety, ny fitsarana tao Bishkek, renivohitra Kyrgyz. Nampangain'ny fitsarana  [ru] ho meloka nohon'ny “famporisihana ny vahoaka iray firenena hifankahala” ary koa nohon'ny fanamavoana ny foko Kyrgyz tao anatin'ny lahatsoratra maromaro nifanesy nosoratany tamin'ny aterineto tamin'ny taona 2010 sy 2011 ilay mpanao gazety teratany Rosiana. I Farafonov izay tsy niatrika io fitsarana io nohon'ny fitsinjovana ny ainy dia nodidiana hando onitra 50,000 soms (manodidididina ny 1 100 dolara Amerikana).
Nanazava  [ru] i Almazbek Moldobekov, mpitsara, fa naleony nanapa-kevitra ny hampandoa onitra an'ilay mpanao gazety toy izay hampiditra azy am-ponja mandritry ny valo taona – raha izay ny fangatahana azo ho fanasaziana azy amin'ny fiampangana azy – io no fiampangana an'i Farafonov voalohany indrindra hatramin'izay. Na izany aza, ireo mpandinika dia mieritreritra fa fihantsiana fifaninanana eo amin'ny vahoaka nasionalista ao Kyrgyzstan, izay mangataka ny fampidirana am-ponja ilay mpanao gazety, sy eo amin'ny foko nasionalista ao Rosia, izay nangataka  [ru] ny famotsorana azy io didim-pitsarana io.
Voampanga araky ny andininy faha 299 ao amin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava ao amin'ny firenena i Farafonov, izay mampihatra sazy amin'ny fandrisihana ny “fifankahalàna eo amin'ny mpiray tanindrazana, na vokatry ny tsy fitovizan'ny lokom-bolon-koditra, na fahasamihafan'ny finoana, na koa fahasamihafan'ny faritra niaviana” amin'ny alalan'ny mediam-bahoaka. Raha nanda ilay mpanao gazety fa tsy famporisihana fankahalana avokoa ny lahatsoratra nosoratany, ankehitriny miteraka  [ru] hatezerana izany izay hita taratra tany amin'ny fampitam-baovao tamin'ny fiteny Kyrgyz. Tao Rosia, nandritra izany fotoana izany, nanao fandrahonana  [ru] ka nitaky ny fandroahana ireo mpifindra monina Kyrgyz ilay mpanao politika nasionalista hiringiriny antsoina hoe Vladimir Zhirinovsky raha toa ka ny ny fonja no sazy nomena an'i Farafonov.
Nahatsapa  [ru] i Lugan, mpamaky iray ny vohikala fampahalam-baovao korrespondent.net fa namerina ny fahatongavan-tsain'ny tsirairay io didim-pitsarana io:
Na teo aza izany, dia maro ireo mponina amin'ny aterineto sasany no naneho ny tsy fankasitrahany io didim-pitsarana io. Ny iray tamin'izy ireny, i Quazy, dia nahatsapa  [ru] fa mampihomehy io sazy io:
Mpaneho hevitra maro tao amin'ireo vohikala voatanisa ao amin'ny .ru  , toa an'i Andrey Yakovenko, no nanandratra  [ru] an'i Farafonov ho amin'ny toeran'ny olona mahery fo iray:
Nanolotra soso-kevitra ny mpaneho hevitra tao amin'ny vohikala maro voatanisa ao amin'ny.kg, toa an'i Knews, hoe tokony omena sazy henjakenjana ilay mpanao gazety. Ohatra amin'izany i Mirbek izay nilaza  [ru] fa:
Raha mpamaky iray hafa kosa antsoina hoe Vym no nanolotra soso-kevitra  [ru] somary mihoa-pampana:
I Bektour Iskender, mpiara-namorona sady filohan'ny Kloop Media ihany angamba no naneho hevitra  [ru] tamim-pisainana tsara mikasika io raharaha io:
Manaporofo mazava tsara “io tranga iray io” ny amin'ny tokony hanoratana zavatra mifanaraka tsara amin'ny tokony ho izy ao amin'ny aterineto. Taorian'ny naha-mpanoratra voalohany indrindra nosazian'ny fitsarana tao Kyrgyzstan vokatry ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny aterineto, nilaza  [ru] ny fomba fijeriny mikasika ny didim-pitsarana tamin'ny raharaha Almazbek Moldobekov i Farafonov tao anatin'ny fanambarana iray navoakan'ny mpisolovava iray tamin'ny 3 Jolay:
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia tohin'ny tatitra mikasika ny raharaha Farafonov mitondra ny lohateny hoe Ny Aterineto miatrika Fitsarana  nivoaka tao amin'ny vohikala Global Voices’ tamin'ny faha 2 Aprily taona 2012.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/31/35108/
 Nampangain'ny fitsarana: http://barometer.kg/index.php/v-kyrgyzstane-blogger-obvinennyj-v-razzhiganii-mezhnaczionalnoj-rozni-zaplatit-shtraf.html
 Ny Aterineto miatrika Fitsarana: https://globalvoicesonline.org/2012/04/02/kyrgyzstan-the-internet-on-trial/